Lahatsary Mahatsikaiky Ho Setrin’ny ‘Vonoy Daholo Ny Olona Ao Shina”: Shinoa Tsy Mety Maty · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Novambra 2013 10:47 GMT
Vakio amin'ny teny Español, 繁體中文, 简体中文, 日本語, Ελληνικά, English
“Nananan'i Shna trosa be i Amerika, mitentina 1.3 arivo lavitrisa dolara Amerikana. Ahoana no hanonerantsika an-dry zareo?” Iray tamin'ireo ankizy no nanoso-kevitra, “Tokony handeha ho any amin'ny lafiny ilany amin'ny tany isika ary mamono ny olona rehetra ao Shina”
Nipoitra tao amin'ny seho iray tao amin'ny fahitalavitra American Broadcasting Company (ABC) ny tantara, “Jimmy Kimmel Live”, ny 16 Oktobra 2013 ka tao anatin'izany no nandraisan'ilay Amerikana malaza mpilalao an-tsehatra, Jimmy Kimmel, resaka an-databatra ataonà ankizy mikasika ny raharahan-trosan'ny governemanta Amerikana. Nampiaka-pofona ny sasany tamin'ireo vondrom-piarahamonina Shinoa-Amerikana ilay tantara, dia ireo nandefa ny fihetsehampony tamin'ny volana lasa iny hipàka hatrany amin'ny tanibe Shina, tamin'ny alàlan'ny media sosialy.
Soa ihany, samy nahatsapa ny ankabeazan'ireo Shinoa fa hoe ilay fanehoankevitra, izay somary nanohintohina, dia resa-jaza fotsiny ihany ary ny ABC sy Jimmy Kimmel dia nanao fialantsiny ho an'ny daholobe taorian'izay. Hiatrehana ny mety ho fiantraikany amin'ny tanibe Shinoa, nisy sarimiaina atao hoe “Undying Chinese” (Shinoa tsy mety maty), navoaka ny 2 Novambra ary miparitaka be ao anaty aterineto.
Ilay lahatsary matianina novokarin'ny “vmini.com”, orinasa mpivarotra amin'ny alàlan'ny lahatsary ary navoakan'ny “dig.chouti.com”, vavahadin-tserasera iray tsy misy hafa amin'ny “reddit.com”, dia naka fomba fijery mahatsikaiky avy amin'ilay fanehoankevitry ny ankizy tamin'ny alàlan'ny famerenana nijery ny tantaran'i Shina hatrany amin'ny fahagola be tany, ny anjara toerany eo amin'ny tontolon'ny fitsinjarana asa ary ny antony maha-hevitra tsy tsara sy tsy handeha lavitra ny hoe hamonoana ny Shinoa.
Ny valinteny voalohany tamin'ny fanehoankevitr'ilay zaza Amerikana dia manilika kokoa ny fandrindràna ara-politikan'i Etazonia antsoina hoe 80-20 momba ny fifandraisany amin'i Azia, ampitahaina amin'ny kabary tsara lahatry ny Nazi ary fametrahana fanangonan-tsonia nanomboka ny 18 Oktobra mba hitakiana amin'ny Trano Fotsy (Lapam-panjakana) hanadihady momba ilay tranga. Nivaky toy izao ilay fanangonan-tsonia:
Mety tsy dia mahafantatra zavatra tsara ny ankizy. Kanefa, olon-dehibe ry Jimmy Kimmel sy ny fitantanana ao amin'ny ABC. Nananan-dry zareo ny safidy tsy handefa iny fandaharana mpanavakava-bolokoditra iny, izay mandrisika ny fifankahalàna ara-piaviana. Tsy azo ekena tanteraka ilay fandaharana ary tokony hotapahana. Fialantsiny avy amin'ny fo no tsy maintsy avoaka. Tena faran'izay tsy levon'ny vavony ilay izy ary tsy misy hafa amin'ny kabary tsara lahatra nampiasain'ny Nazi Alemana namelezana ny vahoaka Jiosy. Miangavy mba tapaho avy hatrany ilay fandaharana ary mamoaha fialantsiny amin'ny fomba ofisialy.
Hatreto dia 88.499 no efa nanao sonia ilay fanangonan-tsonia. Haingana be ny ABC namaly taminà taratasy misokatra ho fialantsiny setrin'ilay fanangonan-tsonia natao ny 28 Oktobra, saingy tsy nahavita nampitony sy nanakana ny hetsi-panoheran'ireo Shinoa-Amerikana.
Hetsi-panoherana manohitra ilay fandaharana ho an'ny ankizy ao amin'ny ABC. Sary ho an'ny daholobe nakarin'i Pang Linyong ao amin'ny Weibo.
Betsaka ny hetsi-panoherana nitranga tamin'ny faran'ny herinandro lasa iny ary i Pang Linyong, filoha fahiny nitarika ny Fikambanan'ireo Shinoa Mpianatra tao amin'ny Anjerimanontolon'i Stanford, dia nanangona sary tao amin'ny Weibo-ny avy amin'ireo toerana nisy hetsi-panoherana. Pang, izay mipetraka any Silicon Valley any Californa amin'izao fotoana izao, dia nanao antso nasionalista iray [zh] tamin'ny 29 Oktobra:
Tokony hihetsika ireo Shinoa tsy maniry ny hovonoina. Ilazao ny namanao hanao ankivy ny ABC sy Disney reny mpiahy azy. Ataovy ankivy ny kianja sy ny fihetsiketsehana Disneyland, mandra-pialan'ny ABC tsiny sy mandroaka an'i Jimmy Kimmel. Raha mbola mandray ny tenanao ho Shinoa ihany koa ianao, aelezo ity hafatra ity ho an'ireo namanao ary miaraha manao ankivy ny ABC. Miafanotrona ao San Francisco sy New York ireo Shinoa-Amerikana. Azafady, ilazao ny hafa.
Saingy tsy dia nahazo fanohanana loatra ity antso nasionalista ity, hatreto dia olona 18 ihany no nanely ilay hafatra tao amin'ny Weibo. Sady ilay izy koa anie resa-jaza e. Tahaka ny nanipihan'i Rensi avy ao amin'ny ChinaSMACK azy, misy any amin'ny firenena tsirairay any ny “Maivan-doha Kely” ary nanangona maromaro tamin'ireny karazana fitondrantena manafintohin'ny ankizy ireny tao Shina ilay bilaogera mba ho setrin'ilay resaka an-databatra niarahana tamin'ny ankizy.
Ny fomba mendrika indrindra hiatrehana ny fihetsehampo manilikilika dia ny fahazakàna hanihany sy fahafantarana tsara ny anton'ilay fankahalàna. Ho amin'izay indrindra, nahavita asa mendri-piderana ilay lahatsary “Undying Chinese”.